11.06.2016 comments (13)
Qoraalkan qofkasta oo reer Puntland waa in uu akhriyaa, dhamanteena masuuliyad ayaa naga saaran bad-baadinta Puntland hadii aan la bad-baadin ma jiri doonta mudo sanad ka yar, Puntland waa in la bad-baadiyaa markan arintu kaftan iyo isku fiirsasho soo dhaaftey. waxaa reer Puntland u dhaxeeyaan Haldoor koodii oo la gumaadayo iyo Masiir koodii oo la xaraashayo.
Warqado sira (classified documents) oo loogu talagaley inaysan dhaafin kaliya saxiixayaasha ku saxiixan waraqaha sida ku xusan, islamarkaasna saxiixa u sareeyana uu leeyahya Raisal Wasaraha DF Omar Abdirashiid (CCC) ayaa dabagal dheer ka dib gacanteyda soo galey. Sida nuqulka 1-aad warqadaha hoos ku lifaaqan ku cad waxaa heshiiskaan ah shaxda qaybsiga Xildhibaana Federalka ee ku salaysan hab awood qeysi qabiil (4.5) la saxiixay 31/3/2016-ka.
Heshiiskaan dhamaan waxaa wada wada gaarey Dawlada Federalka, D/Gobaleedka Galmudug, D/Gobaleedka Jubaland, D/Gobaleedka K/Galbeed iyo Dawlada Puntland oo iyadu magaca Dawlad ku saxiixdey maadama International Community u aqoonsan yihiin Dawlad Gobaleed buuxda.
Hadaba ujeedada heshiiskaan xambaarsan yahay ayaa Masiirka Puntland siyaabo kala duwan dhabar jab ugu ah marka laga yimaado oo aan xisaabta lagu darin qaadashada nidaamka 4.5. Faahfaahin --Mida hore, qaacidada qaybsiga shaxda Xildhibaanada (aqalka hoose) lagu saleeyay waloow qaab qabiil in loo awood qeybsado lagu heshiiyey hadana waxaa warqdahan sida qarsoon wax loogu qeybsadey ku cad - fiiri farqada 1aad wadarta guud xildhibaanada Puntland qayb u heshay waa 40 xubnood guud ahaan -hadaba fasirka arintaan Madaxweyne Gaas inoo saxiixay dhab u fahan.
Qaba'ilada Puntland wada daga ee Daroodka ah dhamaan xubnaha ay qeyb u yeesheen wuxu heshiiskan ku soo koobay Puntland kaliya, islamarkasna Somalia deegamada kale ay wax ka dagan yihiin sida Jubaland waxba kama uu san siin heshiiskan, taa macnaheeda ma aha in xubnaha 40-ka ah Puntland loo kordhiyo balse waxay ahayd xisaabtanka dhabta ah in isla 40-ka qayb ka mida ah laga soo saaro qaybta Jubaland oo D. Gobaleedka Jubaland la hoos geeyo si ay ugu matalaan Qaba'ilkooda halkaas dega. Halka Qaba'ilada Absame xumnaha ay qayb u heleen laba ka mida ka qaateen Bakool oo D/Gobaleedka K.Galbeed hoos tagta si ay awood matalaad ugu yeeshaan - fiiri warqada labaad qodabkiisa afraad. Hadabada maxay tahay sababta ka dambeysa Puntland ma garan waayin inta ay Jubaland garatey oo dhawan saaxada awood qeybsiga siyaasadeed ku soo biirtey balse "timir lafbaa ku jirta".
Daraasada dhaqan iyo siyaasadeed aan ka bartey xukuumada hada xilka haysa Puntland waxa muuqata in Dr. Gaas awooda uun saarey arin DHAQALE iyo sida uu ku heli lahaa 40 xubnood (aqalka hoose) oo isaga ka maamul ahaan hoos yimaada - islamarkasna uu rabo in uu ka iibsado cida uu ku bari-taarayo. Sirta labaad oo baxdey waraaqahan na ku cad ayaa iyaduna ah khiyaamo qaran oo aad u weyn oo laga galey Puntland kana tarjumaysa Puntland in si hoose loo baayacey. Waxaad si dhaba u fiirisaa xiliga warqada ay soo baxdey oo la saxiixay - fiiri warqada 1aad oogada sare. Taariikhda ku cad xiliga heshiiska shan-geesoodka ah uu dhacey waa 31/3/2016kii oo ugu qoran warqada 31 Maajo 2016 waa isla taariikhda Madaxweyne Gaas uu saxiixay heshiiskaan shaxda qaybsiga Xildhibaanda awood qaysiga qabiilka ku saleysanee 4.5.
Waxaan ognahay oo Puntland iyo caalamku markhaati ka yihiin in Dr. Gaas go'aanka 4.5 ee awood qaybsiga qabiilka ku saleysan qaatey islamarkaasna ka tanaasuley awood qeybsiga deegaanka ku saleysnaa Tarikhdu markii ay ahayd 03/04/2016. Fasirka arinkan ayaa ah in Dr. Gaas sadex bari ka hor intuusan mooqifka Puntland ku dhawaaqin uu saxiixay Heshiiska shaxda qaybsiga Xildhibaanada ee 4.5 ku saleysan, islamarkaasna Prime Minister CCC uu 25kii bisha 3aad noqolka heshiiska ugu keenay Garowe si uu u saxiixo Gaas qaybta uu ku leeyaha. Dhinaca kale saxiixa Gaas oo ka sii horeeyay mooqifka Puntland waa mida keentay Madaxweyne Hasan Shiikh inuu ka sii hor dhaco mawqifka Puntland idaacadahna ka sheego inuu soo dhaweynayo talaabada geesinimada leh ay Puntland qaadey wali Puntland oo aanan wax go'aana ku dhawaaqin ama saxiixin. Xaqiiqda dhabta ah Puntland maantey dad ahaan ayay u jirtaa ee xukuumad ahaan uma jirto. Ilaali Xuquuqda qoraalka
Qore: Othman MJ"
safe canadian online pharmacies isota
prescription pricing isota
discount drugs online pharmacy isota
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">cheap canadian drugs
prescription without a doctor's prescription inowl
Попробую также<a href=http://tr.usaeducation.ru/>.</a>
cialis is not working for me deda
<a href= http://devinnair.startbewijs.nl >proscar finasterid</a>
<a href= https://agnusdinap.yolasite.com >nifurantin 500</a>
<a href= http://holleyrapi.spruz.com >zineryt 30ml uk</a>
<a href=http://www.cipramil-08.webself.net>cipramil sanego</a>
<a href=http://lonsibounm.eklablog.net>examenangst propranolol</a>
<a href= http://lonsibounm.eklablog.net >propranolol angst löschen</a>
<a href=http://jadalipfor.e-monsite.com>flagyl metronidazole bijsluiter</a>
co to jest podagra dna moczanowa jaka dieta
dieta przy podagrze dieta przy dnie moczanowej <a href=http://seeknet.pl/>http://seeknet.pl/</a> podagra co jesc jak leczyc podagre
Ninka qoraalkan qoray arrima qabiil ayaa ka hadlaya halka dhibaatada Puntland runti tahay boobka hantida ummada lagu hayo. Dhaqaalaha dhulka galay saxaafada Puntland kama hadlayso maxa yeelay Gaas ayaa jeebka lacag uga buuxshay si aamusaan. Hade hadi runta la qariyo aan laga hadlin iska dhaaf in wax is bedelaan waxa gaari in kacdoon ka dhaco Puntland sida hadaba muuqata. Heerka faqriga meel xun ayaa gaaray dhaqaalahana warkiis daa. Koox yar ayaa dhamaan dhaqaalaha Puntland keligood qeybsanaya.
adeer wax macquula dadka loo sheegaa meel aan mucaaradnimo ku jirin lagama baaro puntland waligeed waa jiraysaa insha allaah waligeedna waxbaan khaldi jirnay kadibna waan sixi jirnay ee orod illahay camal waydiso